Famoahana ho avy ao amin'ny teatra | Bezzia
Maria vazquez | | kolontsaina
Toa miverina tsikelikely ny fahaverezana mahazatra antsika. Fomba mahazatra izay ho tsapa amin'ny sehatry ny kolontsaina, iray amin'ireo tena lasibatry ny areti-mifindra. Tsy ho ela dia hojerentsika indray ao amin'ny premières an-tsarimihetsika Bezzia sy ny kaonseritra, zavatra nandrasainay. Mandra-pahatongan'ny andro, na izany aza, tsy maintsy milamina amin'ny premieres film sasany ianao Tonga amin'ny sinema izy ireo amin'ny volana Jona.
Misy maro film premieres izay hahafahanao mankafy amin'ny volana ho avy, saingy satria tsy afaka hiresaka momba ny tsirairay amin'izy ireo izahay, vitsivitsy ihany no nofidinay. Premières enina izay tantaraina tantara samy hafa be dia be ary namboarinay tamin'ny daty namoahana. Makà!
1 Lehilahy maty tsy mahay miaina
2 Zavamaniry maharitra
4 Vadin'ny mpitsikilo
6 Hira irlandey
Lehilahy maty tsy mahay miaina
Notarihin'i Ezekiel Montes
Starring Antonio Dechent, Rubén Ochandiano, Elena Martínez
Sarimihetsika mitantara ny zava-niainan'i Tano, izay niasa tamin'ny fiainany manontolo ho an'i Manuel, a mpandraharaha mpanao trano fa tamin'ny taloha dia nifehy ny tanàna iray manontolo. Ankehitriny, amin'ny maha-zokiolona lahy azy, dia hitan'i Tano fa tsy afaka mandray an-tanana ny orinasa intsony i Manuel ary miatrika fiovana amam-panao ny orinasa iray manontolo, olona vaovao, orinasa vaovao, fomba vaovao hitondrana asa, fa ilay herisetra taloha.
Notarihin'i Ezequiel Radusky
Starring Liliana Juarez, Rosario Blefari, Veronica Perrotta
Lila sy Marcela dia mpinamana taloha izay miasa amin'ny maha mpiasa mpanadio azy ireo izy ireo ao amin'ny tranon'ny minisitra ary mihazakazaka mangingina efitrano fisakafoanana miafina ao anatin'ny trano. Rehefa misy fahefana vaovao misolo ny toeram-piasanao dia miteraka fanovana maromaro izay fitsapana ny fisakaizanao.
Notarihin'i Susanna Nicchiarelli
Starring Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair
Eleanor 'Tussy' Marx, dia zanaka vavin'i Karl Marx faralahy, vehivavy mamiratra, manan-tsaina, be fitiavana ary afaka. Izy dia iray amin'ireo feminista voalohany izay nitohy tamin'ny lovan'ny rainy sy ny mpiara-miasa aminy Engels. Mpiady tsy an-kijanona ho an'ny zon'ny mpiasa, ho an'ny famaranana ny fampiasana zaza tsy ampy taona, ho an'ny zon'ny feminista ary hanohitra ny tsy rariny maro hafa.
Notarihin'i Kiyoshi Kurosawa
Starring Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashide
1940, Japon. Yusaku dia talen'ny orinasa ara-barotra malaza any Kobe (Japon), ary manambady an'i Satoko. Noho ny antony miasa dia tsy maintsy manao dia mankany Manchuria izy mandritra ny Ady lehibe faharoa. Nandritra ny fotoana nijanonany dia nahita tranga nahatsiravina izy. Rehefa naverin'i Yusaku an'i Satobe i Kobe ny fisalasalana dia nanameloka azy momba ny vadiny, ary na dia milaza ho mino ny vadiny aza izy ary tsy mivadika aminy, dia ahona an'i Yusaku any amin'ny polisy ny fisehoan-javatra
Notarihin'i Júlia De Paz Solvas
Starring Tamara Casellas, Leire Marín, Estefanía de los Santos
Taorian'ny tranga tsy nampoizina, Pepa sy Leila, zanany vavy enin-taona, tavela eny an-dalambe tsy misy trano itodihany izy ireo. Tsy misy hanampy azy ireo dia hiady irery i Pepa sy i Leila hitady toerana hipetrahana. Mandritra ny fikarohana azy dia varavarana maro no hakatona ho an'ilay mpilalao sarimihetsika ary tsy hanana fanantenana intsony izy. Na izany aza, eny an-dàlana dia hahita rohy misy eo amin'ny reny sy ny zanany vavy izy ireo mandraka ankehitriny.
Notarihin'i John Patrick Shanley
Starring Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm
Nandany ny androny niasa tany an-tsaha i Anthony, reraky ny fanamavoan'ny rainy foana. Indray andro, nandrahona ny hanaisotra azy ny rainy ary hanome ny toeram-pambolena sy fiompiana ho an'i Adam zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Ny tanora Rosemary, tamin'ny voalohany, dia toa nitahiry lolompo tamin'i Anthony noho ny fotoana maro nahamenatra azy tamin'ny fahazazany, saingy hitsambikina eo anelanelany izy ireo. Ny reniny Aoife dia manandrana mampivondrona ireo fianakaviana ary manosika ny elanelany roa alohan'ny tara.
Te hahita ny iray amin'ireo premiere film ho avy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » kolontsaina » Famoahana teatra ho avy